Madaxweynaha Faransiiska oo booqanaya dalka Mali • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Madaxweynaha Faransiiska oo booqanaya dalka Mali
Madaxweynaha Faransiiska oo booqanaya dalka Mali
February 2, 2013 - By: Hanad Askar
Hogaamiyaha kumeelgaarka ah ee Mali Dioncounda Traoure iyo Francois Hollande.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande ayaa maanta booqasho ku jooga dalka Mali. Madaxweynaha ayaa kulamo la qaadan doona ciidamada Faransiiska ee halkaas ku sugan, waxaana laga sugayaa in uu ka hadlo qorshaha ciidamada Faransiiska ee dalka Mali ku sugan.
Madaxweynaha waxaa safarkiisa ku weheliya Wasiirada Arrimaha dibadda, Gaashaandhiga iyo Deeqaha. Afartooduba waxay booqasho ku tageeen magaalada Timbuktu oo ahayd goob dhawaan laga saarey kooxaha islaamiyiinta ah waxaana loogu soo dhaweeyey si wanaagsan.
Faransiiska ayaa doonaya in hawlgalka Mali ay hoggaamiyaan Midowga Afrika kaas oo loogu magacdaray AFISMA.
Booqashada madaxweynaha Faransiiska ayaa ku soo beegmaysa xili ciidamada dalka Mali lagu eedeeyey in ay geysteen xasuuq ka dhan dadka ka soo jeeda waqooyiga Mali ee isugu jira Carabta iyo Tuarega. Boqolkiiba 15 dadka degan Mali ee 16 milyan ah waxa ay ka soo jeedaan qawmiydaha Tuarega iyo Carab waxaana ay degaan saxaraha Waqooyi ee dalkaas, waxaana ay muddo dheer doonayeen in ay ka go’aan Maali inteeda kale.
Hawlgalka hadda Faransiisku hormuudka ka yahay ayaa la filayaa in uu dheeraan doono muddada uu socdo, waxaana dalalka Afrikada Galbeed qaarkood ay ku yabooheen ciidamo ka hawlgala dalka Mali.